Umzi mveliso wethu uneminyaka eli-10, kwaye sihlala sizama konke okusemandleni ukubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo kubathengi bethu, sijonga yonke into ngaphambi kokuba siyithumele, siyathemba ukuba sonke isiqwenga esisezandleni zomthengi wethu silungile kwaye siqinisekile. Ukuba neemveliso ezindala azonelanga, ukuze unike ukhetho ngakumbi kubathengi ukuba bakhethe.Lonyaka siphuhlise izinto ezintathu, ezi zinto zinenkangeleko yanamhlanje ye-amd eyomeleleyo.Iziqwenga ezimbini zecompressor yomoya kunye nesicoci esinye sokucoca, masijonge.
I-CY102-16, le nto iyisilinda esiphindwe kabini somoya, onke amalungu esinyithi anamandla amakhulu.it kujongeka ngathi kukulalelwayo, kunye nokuboniswa kwe-LED, kulula ukuba kusetyenzwe, kwaye kuyekwe ngokuzenzekelayo, kunika umthengi imvakalelo engcono yokusebenzisa. yenza imibala eyahlukeneyo kubathengi, imveliso iya kuba ntle kakhulu.
Le nto igqityiwe ukuyila, siza kwenza uyilo lwe-morden kunye nomzimba omncinci wayo, ke kuya kuba lula kakhulu ukuyiphatha, ukuba umthengi ufuna, singabeka ibhetri ngaphakathi, inokuphinda igcwaliswe kwakhona yi-USB ngayo nayiphi na iplagi. njengoko inokusetyenziswa ngaphandle kocingo, ilunge ngakumbi kwaye inokonga ixesha elininzi labasiki .Nakuba incinci, ikwanokufaka ivili ngexesha elifutshane.Ungakhathazeki ngexabiso, lisenomtsalane.
I-VC-113 sisicoci esitsha sokucoca, inomzimba omncinci, kunye namandla amakhulu okutsala, ijongeka ngathi yindebe, onokuyibeka naphi na apho ufuna khona, kwisitulo semoto okanye kwisofa ekhaya, ayisoze phantsi ngenxa yenkangeleko entle ekhangeleka kakuhle kulula kakhulu ukususa uthuli kunye negranule, nkqu nekofu echithe ngokungakhathali.Sinokwenza imibala eyahlukeneyo yomthengi, kwaye siprinte ilogo emzimbeni weemveliso.
Kunyaka omtsha, sikwazi ukusebenzisana nabathengi abaninzi kunye nabahlobo abaninzi kwihlabathi, ndiyakholelwa ukuba iya kuba ngunyaka omnandi!